वार्ताबारे विप्लव समूहको रणनीति यस्तो ! कुन प्रदेशमा कस्तो प्रभाव ?
वार्ताबारे विप्लव समूहको रणनीति यस्तो ! कुन प्रदेशमा कस्तो प्रभाव ?
काठमाडौँ - प्रहरीले दुई वर्षयता नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका आठ सय ४६ नेता/कार्यकर्ता पक्राउ गरेको छ । गत २९ फागुनमा पार्टीमाथि प्रतिवन्ध लगाइएपछि देशभरबाट सात सय ६१ जना पक्राउ परेका छन् । त्यसअघि ८५ नेता/कार्यकर्ता पक्राउ परेका थिए ।
प्रहरीकाअनुसार पक्राउ गरिएकामध्ये सात सय ९२ विरुद्ध मुद्दा चलेको छ । एक सय २४ पुर्पक्षका लागि जेलमा छन् । ६२ माथि अनुसन्धान जारी छ । सबैगरि विप्लवका एक सय ८६ नेता/कार्यकर्ता सरकारको नियन्त्रणमा छन् । बाँकी तारेखमा रिहा भएका छन् ।
सैद्धान्तिक रूपमा आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक, राजनीतिक र लैंगिक हिसाबले सीमान्त मानिएको कर्णाली र प्रदेश ७ मा विप्लव समूहको प्रभाव बढी हुनुपर्ने हो । तर, प्रदेश ४ र ५ मा यो समूहको गतिवधि बढी छ । अझ त्यसमा पनि सहरी क्षेत्रमा यो समूहको उपस्थिति बाक्लो देखिन्छ । यस्तो किन भयो त ?
सरकारसँग असन्तुष्ट युवा विप्लवमा लागेका छन् : हेमन्त मल्ल, पूर्वडिआइजी